Fivavahana sy Politika
2010-01-14 @ 22:20 in Finoana
Andro vitsivitsy tsy nanoratana sahala amin'ny hoe efa be dia be sahady ny zava-nitranga. Izay tsy dia misy mpilaza loatra angaha no andeha tantaraina, mba hifameno amin'ny voasoratry ny hafa ka hahalalana bebe kokoa ny zava-misy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Efa nandalo ny andiany faharoa tamin'ny hetsiky ny mpitondra fivavahana, tamin'ny Asabotsy lasa teo. Hita ho hetsika tsy niomanan'ny mpifehy ny fahefana amin'izao fotoana izao izy io matoa somary maherihery ny teny ataon'ny tsy manakasitraka ity hetsika ity sady mpanohana ny fehefana misy rahateo. Ny nahavariana moa dia ny setriny nataon'ny sasany tamin'ny alalan'ny famelabelaran-kevitra. Sady mitonona ho avy amin'ny faritany enina, no mitonona ho avy eny amin'ny Anjerimanontolo, nefa dia mitonona ho avy eny Ambany tanàna; izay hoe tiany ho voafoaka avokoa rehefa tanora rehetra. Dia mametraka fampitandremana ry zareo... izany hoe famaizana tsy amin'ny alalan'ny fisamborana ataon'ny manam-pahefana no tiany atao fa amin'ny alalan'ny fandefasana jiolahimboto hisotasota, hanendaka na hamono mihitsy aza. Te-hametraka izy fa tsy misy izay tsy vitan'ny hery ary ny tiany ampihorohoroana dia ny fanahy.
Eto aho dia mahatsiaro tampoka ny nahatafatsangana ny FFKM. Tsy nijoro ho fampiombonana ny fiangonana ihany io Fiombonana io ka hoe resa-pivavahana ihany no ifampidinihana ao fa mety hisandrahaka amin'ny lafim-piainana maro; ka tsy ambaka amin'izany ny Sehatra Fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Asa aloha na politika no resahina amin'izany sehatra izany na inona fa ny fantatro kosa dia karazana tsindrilentam-pahefana izy io tsy hanjakazakan'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany (1980) izay tsy nanaiky ny hisian'ny antoko ivelan'ny foto-kevitra revolisionera na ivelan'ny Mandatehezana Miaro ny Tolompiavotana na FNDR (Front National de la Revolition fa tsy ilay Front National Frantsay tsy akory) . Aza atao mahagaga sady ho fampahatsiahiana izay efa nandalo vanim-potoana izany raha saiky nanana anarana fanampiny avokoa ny Antoko politika nijoro tamin'izany fotoana izany hanekena ny fisiany eo anatrehan'ny fanjakana ankoatra ny antoko Arema izay efa mitonona ny amin'ny maha-revolisionera azy ihany sy ny Monima nilaza azy ho Ka Mioviombio (tsy mivilivily). Ny MFM lasa niampy MFT tsy tadidiko intsony ny fanalavana azy na Mpitolona ho amin'ny fampanjakana ny Tolompiavotana (fa tsy Tetezamita velively kos aloha!) na inona. Ny AKFM nisy tohiny hoe KDRSM tsy ahiko intsony ihany koa ny tohiny fa angamba (angamba hoy aho mamerina fa iangaviana izay mahatadidy hametraka azy) Komity Demokratin'ny Revolisiona Sosialista Malagasy), ny VITM-KMTA na Vonjy iray tsy mivaky - Komity manohana ny Tolompiavotana. Noho ny nahasahian'ny FFKM nilaza ny fahasahiranana manjò ny olona sy ny faneriterena isan-karazany dia tsy nekena ara-panjakana, araka ny fitadidiako azy io Fiombonana ity saingy nandroso ihany. Noho ny Hery nananan'ny FFKM sahady dia tsy levon'ny Filoha nitondra tamin'izany fotoana izany ny fijoroany ka nahatonga azy tia hanasongadina ireo fiangonana na fikambanam-piavahana niorina taty aoriana. Nisy aza moa ny fifanarahana vitany tamin'ny Mpitarika ny Revolisiona Lybiana hanitarana ny ambaindain'ny finoana Islamo teto Madagasikara saingy nitsaha-kevitra io fa efa tafaomana tamin'izany ny fiangonana.
Nanomboka tamin'ny taona 1972 no nijoro ho mpanelanelana mandrakariva teo amin'ny sehatry ny fiainam-pirenena ny mpitondra fiangonana sy ny mpitondra fivavahana, ary nantsoina hatrany hametraka ny dinidinika sy tapatapak'ahitra rehefa misy olana eto amin'ny Firenena. Nijoro ho aron'ny malemy eo anatrehan'ny matanjaka sy mpihoa-pahefana, nohenointeny satria mahasahy milaza izay tsy sahin'ny olo-tsotra lazaina, noho ny tahotra ho tratran'ny antsojay amin'ny filazana azy ho mpanoha-riana, nefa tsy nitady seza velively ankoatra ireo efa fantatra ho mpanao politika mazava loatra. Tsy mahagaga raha nanankinana ny fitarihana Fihaonambem-pirenena sy ny fikaonandoham-pirenena tamin'ny 1990-1992. Dia toy izany ihany koa tamin'ny taona 2009, izay notarihan'ny mpitondra fiangonana efa-dahy tao amin'ny FFKM manokana, ary na dia ny Fiaraha-monina iraisam-pirenena aza dia nanankina izany. Nisy mizàna nitongilana be anefa tao anatiny ary hita fa lalana iray nandravana ny Fiombonana no nataon'ny sasany. Tsy ny Fiombonana ihany anefa no nokendrena fa tiana nopotehina tao ihany koa ny Fahefana sy Hery ara-panahy nananany hahasahy hiatrika sy hanambara amin'ny fahefana ara-politika ny tsy mety nefa mitranga eto amin'ny firenena. Tao ho ao no nitranga indray ny ezaka na hetsika hamerenan-kasina ny mpitondra fivavahana hijoro ho mpanelanelana indray eto amin'ny firenena, ka mba tsy voatery ho ny vahiny any ivelany no handamina ny tsy fetezan-javatra misy eto Madagasikara na hiampita Riaka vao hahavaha olana. Koa heloka ho an'ireo mpitondra fivavahana ireo ve raha miezaka hamerina ny hasiny izay izy ireo?
Eto dia tsy azo adinoina ny fahalasanan'ny Kardinaly Armand Gaetan Razafindratandra, izay mpitari-dalana tamin'ny fananganana indrindra ny FFKM, sy saiky hanatontosa ny dingana famerenan-kasina ny mpitondra fivavahana izany amin'ny faha-23 janoary 2010 ho avy izao, izany hoe ao anatin'ny Herinandro Fiaraha-mivavaka manomboka ny 18 janoary isan-taona io, saingy hafa moa ny zava-misy ankehitriny tamin'izao nahalasanany izao. Mino dia mino aho fa io Herinandro Fiaraha-mivavaka fanao isan-taona io no "action" tian'ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana hahatongavana mba hanjaka ao ny vavaka ho an'ny firenena, saingy tombatombana ihany ny ahy izay... Ny iray faharoa eritreretiko moa dia tsy mitombina loatra satria tsy fanaon'ny FJKM loatra indrindra indrindra ny "excommuniation" (tsy haiko na mety io fanoratana io na tsia!) haneren'ny fiangonana tsirairay ny mpitondra tsy mendrika hanaiky ny fahadisoany; nefa dia mahagaga fa nosoratako ihany. Eto dia mahavariana hoe nanaraka ny Kardinaly ve ny asany? Mitondra teny fiaraha-miory amin'ny EKAR hatrany ny tena amin'izao nahalasanany izao. Lehilahy voky andro ihany izy koa mbola hohalahelovina fatratra indray ve?
Dia miitatra hatrany ny fanoratana ka dia mitohy ny fanazavana. Ny Tsikera mahazo ny mpitondra fivavahana moa dia ny famerimberenana mandrakariva hoe miditra amin'ny resaka politika (fanjakan'ny tany) nefa ny asany dia ny manambara ny fanjakan'ny lanitra. Anjaran'izay mitsikera ny mamaly raha tafiditra amin'ny resaka politika ny fampanjakana ny halatra (toy ny fitrandrahana bolabola na andramena), tafiditra anatin'ny politika ve izany ny famotehana ny asan'ny sarambambem-bahoaka, tafiditra anatin'ny politikany sa tsia ny fandanindaniam-poana amin'ny fifaninanana mividy fiara raitra sy manao fety hihinanan-kanina mandrakariva? Tsy hay intsony na dia lasa lavitra loatra sain'ny Minisitry ny Fifandraisan-davitra sy teknolojia vaovao avy amin'ny FAT raha teny hoe "miara-miombon'antoka" no tokony nolazainy fa "Miara-miombon'heloka" no voateniny voalohany vao nahitsiny. Ny Mpamaky Baiboly dia tokony hahalala fa ny mpaminany ao dia matetika ny fihetsiky ny mpitondra hatrany no tsikerainy voalohany, vao manaraka koa ny fihetsiky ny sarambambem-bahoaka. Koa raha mitanisa ny tsy mety ataon'ny maro izy ka tafiditra ao sy lohalaharana amin'izany ny ataon'ny mpifehy ny fahefana dia manao ny asa maha-mpaminany araka izay fahita ao amin'ny Baiboly indrindra koa ireo mpitondra fivavahana ireo.
Fa ny mahavariana ny mpitsikera ny fitenitenenan'ny mpitondra fivavahana ny tsy mety ataon'ny rehetra, ka ao ihany koa ny ataon'ny mpitondra isan-tokony, eo amin'ny seha-piaraha-monina sy ny fiainam-pirenena tsy hanafangaro ny fivavahana amin'ny politika dia ny tsy fahitan'izy ireo ny fanafangaroan'ny mpifehy ny fahefana ara-politika ny fampidirana anaty kabary politika ny tenim-pivavahana sy anarana ivavahana. Moa ve tsy betsaka ireo mpitondra politika no maka andinin-tsoratra avy amin'ny bokim-pivavahana na manonona anarana ivavahan'ny olona? Vao tsy efa no nanao kabary misy izany ny filohan'ny FAT ary dia nanao kabary nifandraika ami'nizany ihany koa ny Praiminisitra FAT notendrena farany teo. Koa izy io moa resaka tapak'ahitra sy andribe amin'ny maso koa tsy azoko izay anton'ny tsikera ifampidiran'ny politika sy ny fivavahana. Miandry fanazavana avy amin'ny maro angaha ny tena hampahazva kokoa ity resaka ity.
Farany, misy ahiana mafy angaha ny mpitondra na te-hampiseho ny tanjany ka fiara 4x4 telo sy kamiao telo samy hipoka mpitandro ny filaminana sy mitana fitaovam-piadiana no atao mitomandavana mivezivezy manerana an'Antananarivo tao ho ao izay. Nisy moa ny nihevitra fa ny anton'ny fisavana ny tranon'ny filoha Ravalomanana dia ny fanahiana fandrao manao fanahy iniana tonga eto Madagasikara handevina ny Kardinaly ity filoha nitondra an'i Madagasikara ity ka alefa aloha ny ramatahora hikosehana tsikelieky ihany koa ny lazany.
Jentilisa, 15 janoary 2010 amin'ny 00:24